Ny fanahin'ny FEELLiFE: manome faha-3 Fomba dosing Fa olombelona
1. Ny Fiovam-po Frequency Surge® Nebulization Teknolojia
Price zatra niaina tamim-pahendrena matetika. Ny price tahan'ny sy ny vola azo ahitsy araka ny marary matetika ny miaina ka nampitombo ny tahan'ny deposition ny rano ao amin'ny lalina havokavoka. Fiovam-po iray matetika nebulization mitovy ny fomba nebulization taloha intelo.
2. Self-Manadio Teknolojia
Amin'ny alalan'ny fitaovana iray izay afaka kabone ho azy ny sombin nebulizer rehefa fahefana-on. Ny nebulizer mandeha ho azy, no hiditra ao fomba fanadiovana, rehefa nihodina, ary crank ny hery eject ny residual zava-mahadomelina amin'ny fiantraikany lehibe kokoa hery am-piandohana 5 segondra, mba hampihenana ny toe-javatra ny zava-mahadomelina sakanana.
3. Fanaraha-maso Temperature Induction Ary Dry Nirehitra Fisorohana Teknolojia
Temperature induction fanaraha-maso: ny NTC nebulizer induction. Nebulizer manana NTC thermistor izay afaka mamantatra ny mari-pana ny vahaolana eo amin'ny fanafody kapoaka, dia hampidina ny hafanana avy hatrany ny mari-pana rehefa mahatratra 45 ℃, indrindra ho fiarovana ny asa 'ny rano.
Dry mirehitra Fisorohana ny teknolojia: ny fampiasana ny fanafanana miolakolaka mba mahatsapa raha ny vahaolana amin'ny trano fanobian'ny rano dia reraka. Ny nebulizer dia handrindrina-midina rehefa tsapany ny vahaolana ao amin'ny trano firaketana ny rano dia lany, mba hiarovana ny nebulizer tapa-damba tsy ho ravan'ny afo maina.
Amin'ny hafanana avo fanoherana, fipoahana-porofo ny asa sy ny fiarovana avo fampisehoana, fiampangana sy ny marary mitsika dia afaka mahatratra 3000 tsingerina, ny fanompoana ny fiainana dia hatramin'ny 5 taona.
5. Mesh® Nebulizer Piece Material Ary Laser loatra Punching Teknolojia
Titane firaka nebulizer kely dia afaka hanohitra harafesiny, miaraka amin'ny tsara biocompatibility, mahatonga nebulization azo antoka kokoa.
Ny perforation tamin'ny laser mitandrina ny mason-koditra savaivony amin'ny 2.5um ± 25%, mahatonga ny dipoavatra poti mihantahanta kokoa ka nampitombo ny tahan'ny deposition ny rano ao amin'ny lalina havokavoka, mahatonga ny zava-mahadomelina sy ny fahombiazan'ny hisakana ny fiasan'ireny ho tonga tsara kokoa.